दरबार हत्याकाण्डको १६ वर्षपछि बन्दै वीरेन्द्रको वंश नास भएको त्रिभुवन सदन !
ARCHIVE, NEWSPAPER » दरबार हत्याकाण्डको १६ वर्षपछि बन्दै वीरेन्द्रको वंश नास भएको त्रिभुवन सदन !
काठमाडौं – तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नास भएको नारायणहिटीस्थित त्रिभुवन सदन अबको डेढ वर्षमा निर्माण हुने भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्रिभुवन सदन पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न लगाएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।